Mijanona eo alohan'izay foana!
Faingàna ny Hafanàm-po an Transformation dia miaraka amin'i NewGenApps
Ny serivisy serivisy fanolorana tolotra
Fantatray hatrany aloha ny megatrends, Mobile, Cloud, Big Data, AI / ML, Blockchain, Deep Learning, NoSQL, IoT, IIoT Analytics ary ny Insights, GraphQL, Containers, Kubernetes, ary ny hafa hanome anarana vitsivitsy amin'ny maro. Vitsy dia vitsy no nahavita azy tamin'ny hafainganana sy ny refy toa antsika!
INTERNET an'ny zavatra
Alao an-tsaina ange ny tranonao miresaka aminao na amin'ny fiaranao. Door miresaka amin'ny jiro jiro. Tsara! Sa tsy izany?
Mampivelatra karazana rindrambaiko amin'ny Internet izahay izay afaka mamaha olana isan-karazany amin'ny fomba mahomby araka ny takiana.
iPhone, iPad, Android, Facebook ary ampanjifaina ny Google Apps fampandrosoana ny fampiharana
Lehibe saika amin'ny sehatra rehetra na fikarakarana ara-pahasalamana, fanabeazana, vola, famokarana, sns.
ML dia fampiharana ny famakafakana data izay manamboatra ny modelin'ny famakafakana modely.
FAMPANDROSOANA NY LANGUAGE
Sampan'ny Fahaizana artifisialy mifandraika amin'ny famoronana, fahazoana & famakafakana ireo fiteny.
Famantarana hosoka, fihenan'ny vidiny ary fanolorana fanatsarana miaraka amin'ny fanampian'ny Big Data Analytics.
Offering Cloud Migration Serivisy, Serivisy fampiantranoana Cloud ary IaaS / PaaS.
TENA TENA VIRTUAL
Fifandraisana amin'ny tontolo nomerika amin'ny tena izy ary koa mamorona fanahafana tena izy
Mamorona tontolo iainana toy izany ao anatin'ny rindrambaiko izay mifangaro amin'ny atiny tena izy.
Ampitomboy ny fifanakalozana varotra, Ampitomboy ny tahan'ny valin'ny fampielezan-kevitra, Ahenao ny fandaniana amin'ny marketing.
Amazon Web Services, manome ny Cloud Services Platform feno.
Siansa momba ny angon-drakitra sy statistika izay manangana refy amin'ny tontolo manodidina anao hahazoanao fomba fijery misy dikany amin'ny fironana sy fifandraisana. Lohahevitra mahaliana be miaraka amin'ny fihanaky ny lehibe Data analytics fitaovana manome hery hananganana indray ireo lamina avy amin'ny habetsaky ny fampahalalana tsy voarindra.
fahaizana artifisialy dia ny faharanitan-tsaina asehon'ny milina, tsy mitovy amin'ny faharanitan-tsaina voajanahary nasehon'ny olombelona sy ny biby, izay misy fahatsiarovan-tena sy fientanam-po. Ny fanavahana ny sokajy teo aloha sy ny farany dia matetika no nanambara ny fanafohezana voafidy.
Ny fandalinana ireo algorithma solosaina izay manatsara azy ho azy amin'ny alàlan'ny traikefa & amin'ny alàlan'ny fampiasana angona. Ny algorithms dia ampiasaina amin'ny fampiharana isan-karazany, toy ny sivana amin'ny mailaka & fahitana solosaina, izay sarotra na tsy azo atao ny mamorona algorithma mahazatra hanatanterahana asa.
Ny haino aman-jery sosialy dia manome sehatra tsara ho an'ny matihanina hifaneraserana amin'ny mpijery sy ny mpanjifany. Amin'ny alàlan'ny fampiasana fitaovana mety sy teknika ara-tsosialy dia afaka manangana mpanaraka be dia be ianao ary lasa toetra indostrialy mifandraika amin'izany.
Iray amin'ireo teknolojia manan-danja indrindra amin'ity taona ity ny Cloud computing. Ny rahona dia ahafahan'ny orinasa manome serivisy isan-karazany arakaraka ny tinady, ary mamela ny mpampiasa internet hiditra amin'ireo serivisy ireo nefa tsy mila mividy fitaovana vaovao.
Fitaovana fivarotana dia afaka manara-maso ny fandrosoanao ary manome refy amin'ny fandraisana andraikitra ahafahanao mahomby. Amin'ny alàlan'ny automatisation ny scripto dia azonao atao ny mampitombo ny hafainganam-pandehanao manakatona fifanarahana. Hamarino tsara fa mandeha ho azy ny fantsom-pifandraisanao, ary zahao matetika.
Blockchain dia teknolojia revolisionera izay mety hahatonga ny fifanakalozana ho mora sy azo antoka kokoa. Amin'izao fotoana izao, ny tahan'ny isan'ny olona mividy an-tserasera dia miakatra, ary izany dia nahatonga ny fitomboan'ny bot sy ny spam amin'ny tranokala.
Fanatanterahana ny asa mifototra amin'ny lalàna amin'ny alàlan'ny fampiasana vahaolana rindrambaiko be pitsiny mba hampihenana ny fiankinan'ny olombelona amin'ny asa mahazatra. Fanodinkodinana tahiry amin'ny CRM, ERP, Fanohanan'ny mpanjifa tsy misy fanaraha-maso.
Mifehy ny indostrian'ny teknolojia miaraka amin'ireo fandaharana manana ny lanjany, chatbots dia mpitsikilo miresaka mahay mifampiresaka amin'ny olombelona. Izahay dia mandroso hatrany amin'ny alàlan'ny famolavolana ny botany manokana, natao manokana ho an'ny indostria rehetra.
ny Core Values
Ny soatoavina izay tazonintsika mba hamoronana ny fototra iorenantsika asa sy fitondran-tena.
Mino izahay fa hanana fitsipi-pitondrantena sy etika tsara ary hanao ny tsara, na iza mijery.
Ny olona manana fandraisana andraikitra dia voatosika hanao zava-baovao. Raha mandray andraikitra ianao, dia vonona ny hanao zavatra samirery.
Ny dian'ny fampandrosoana tsara ny tsirairay ary ny fanatsarana ny matihanina ary koa ny momba azy manokana.
Raha mikasa ny hanao zavatra ianao dia tapa-kevitra ny hamita azy. Raha manana fikasana ianao dia manana antony manosika na tanjona.
Mampihatra hevi-baovao, lamina vaovao ary eritreritra mamorona mba hanatsarana ny fomba fanaovan-javatra amin'ny ankapobeny.
Nahoana no misafidy Izahay?
Aminay dia tsy asa fotsiny izany - mirehareha amin'ireo vahaolana hatolotray izahay ary tsy afa-po mandra-pahatongan'ny tetikasa mifanaraka amin'ny fari-pitsipiky ny tena manokana.
Miezaka hatrany izahay mihoatra ny fanantenan'ny mpanjifanay ary manangana fifandraisana maharitra miaraka amin'izy ireo.
Manana mpanjifa 900+ mahery izahay.
Ny sasany amin'ireo mpanjifanay izay nanombohanay niasa tamin'ny taona 2008 dia mbola miara-miasa aminay, miaraka amin'ireo fampiharana azy ireo no miseho imbetsaka ao amin'ny App Stores sy Google Play, bilaogy ary magazine.
Eo ho eo, manana orinasa 80% miverina izahay.
Nanangana rindrambaiko finday izahay hatramin'ny namoahana voalohany ny iOS sy ny Android ho an'ny mpamorona tamin'ny 2008.
Manana ekipa manam-pahaizana momba ny indostria efa za-draharaha izahay izay afaka mamolavola ny orinasanao manomboka amin'ny alàlan'ny teknolojia vaovao sy ny fomba fiasa miasa.
Nandefa fampiharana sarotra koa izahay rahona vahaolana izany dia mila fahaizana manokana momba ny sehatra.
Manolotra tolotra maro avy amin'ny famolavolana, fampiharana finday (native, cross-platform), fampivoarana tranokala ary rahona vahaolana ka tsy mila mitady ekipa hafa any an-kafa ianao. Tsarovy:
Manana manam-pahaizana manokana momba ny lohahevitra (UKM) manokana amin'ny teknolojian'izy ireo.
Mikarakara ihany koa izahay rahona computing amin'ny alàlan'ny Amazon Web Services (AWS) mba hanomezana vahaolana miorina amin'ny rahona azo itokisana ho an'ny filan'ny orinasanao rehetra.
Mampiasa vola amin'ny talent pool ho an'ireo mpiasanay hijanona eo alohan'ny filan'ny talenta amin'ny alàlan'ny fizotran'ny fanombanana mitohy.
Izahay dia manara-maso tsara ireo mpikambana ao amin'ny ekipantsika mandritra ny fanangonana azy ireo.
Ny ekipanay dia manatrika tsy tapaka ny kaonferansa ho an'ny mpamorona (toa ny WWDC).
Izahay dia manohy manavao ny tenantsika amin'ny fandrosoana farany amin'ny haitao izay iasantsika.
Fantatsika fa raha misy fampiasam-bola tsy manana ROI tsara dia tsy tokony hatao ny fampiasam-bola.
Vahaolana avo lenta sy lafo vidy amin'ny fampiasana maodely ivelany.
Tsena haingana kokoa.
Mampiasà maodely maodely izay manome antoka fa hamorona toe-javatra mandresy izahay ary hahazo RoI ambony ianao.
Manaraka ny fihodinan'ny tetik'asa mailaka sy mahay mandanjalanja izahay hanampiana ny ekipantsika hamaly ny tsy fahatanterahana amin'ny alàlan'ny famerenana matetika.
Afaka mampifanaraka ny tenantsika amin'ny fanovana sy ny fiaraha-miasa avo lenta isika.
Raha fanombohana ianao ary te hahita ny fivoaran'ny vokatrao isaky ny dingana, dia eo amin'ny toerana mety ianao. Azonao atao ny mitazona ny làlan'ny prodct anao amin'ny dingana rehetra amin'ny fampandrosoana azy.
Vahaolana tsara indrindra ho an'ny Business
Faly be aho tamin'ny tetikasako NewGenApps. Miavaka ny ekipa. Tena mamaly sy manontany tena. Mametraka fanontaniana lehibe izy ireo ary manome sosokevitra tena tsara na inona na inona lohahevitra. Fantatro foana fa teo am-pelatanana aho ary hahazo izay nangatahiko- na tsara kokoa. Ny serasera hatreto, NewGenApps fananana lehibe indrindra. Afaka nahazo valiny mazava sy voatonona avy hatrany aho. Tsy nila niandry na namaly valiny mihitsy aho- tonga avy hatrany izany. Ny ekipa dia manana etika miasa tsy mampino ary miahy fatratra ny mpanjifany. Mikasa tanteraka ny hiasa bebe kokoa aho NewGenApps, ary manoro hevitra izay rehetra manangana fampiharana hanao toy izany koa. Ekipa mahatsiravina izay mamokatra asa kalitao. Hijery an'i NGA foana aho amin'ny tetikasa rehetra.
Lahateny miaraka amin'i Milo
Faly be aho tamin'ny tetikasako NewGenApps. Miavaka ny ekipa. Tena mamaly sy manontany tena. Mametraka fanontaniana lehibe izy ireo ary manome sosokevitra tena tsara na inona na inona lohahevitra. Fantatro foana fa teo am-pelatanana aho ary hahazo izay nangatahiko- na tsara kokoa. Ny serasera hatreto, NewGenApps fananana lehibe indrindra. Afaka nahazo valiny mazava sy voatonona avy hatrany aho. Tsy nila niandry na namaly valiny mihitsy aho- tonga avy hatrany izany. Ny ekipa dia manana etika miasa tsy mampino ary miahy fatratra ny mpanjifany. Mikasa tanteraka ny hiasa bebe kokoa aho NewGenApps, ary manoro hevitra ny olona rehetra manamboatra rindranasa hanao toy izany. Ekipa mahatsiravina izay mamokatra asa kalitao. Hijery an'i NGA foana aho amin'ny tetikasa rehetra.
Newgenapps nanao asa mahatalanjona tamin'ny tetikasako. Nandeha kilometatra fanampiny ny ekipa tamin'ny faritra rehetra! Ny maha-matihanina azy ireo, ny fahaiza-manao teknika lalina, ny fahaiza-manao eo amin'ny fandaminana, ny serasera lehibe ary ny fitantanana ekipa efa za-draharaha no nahombiazan'ity tetik'asa ity. Ny zava-drehetra manomboka amin'ny tolo-kevitra ka hatrany amin'ny fanaterana farany - Newgenapps tsofy ny fifaninanana. Rehefa tonga ny olana ara-teknika dia haingana ny ekipa namantatra ny safidy vahaolana ary avy eo nampita mazava azy ireo tamin'ny ekipanay mba hanapahana ny safidy tsara indrindra. Newgenapps Mpampianatra mahay ihany koa amin'ny faritra tsy nahitana traikefa taminay - namakivaky ny fizotrany sy ny dingana ilaina mba hahavitana haingana sy mahomby ilay asa. Ity dia orinasa ahafahanao manangana fifandraisana maharitra. Tena mamporisika azy ireo izahay ary manantena ny hiara-miasa aminy Newgenapps amin'ny tetikasanay manaraka.
Andao hanangana mahatalanjona!
Farany avy amin'ny Blogs
Torolàlana feno amin'ny fampitomboana ny famokarana fitarihana sy ny tahan'ny fiovam-po
Jan 6 | Hafanàm-po an Transformation
Ahoana no ahafahan'ny votoaty video manampy anao hamorona feo marika
Jan 4 | famoronana votoaty, Content Marketing, Hafanàm-po an Transformation